Jamie Carragher Oo Digniin Ku Bixiyay In Ciyaartoyda Premier
Jamie Carragher ayaa digniin ku bixiyay in ugu yaraan hal xiddig oo Premier League ah laga heli doono maanta caabuqa Karoona.
Waxaa maanta baaritaan lagu sameynayaan dhamaan ciyaartoyda horyaalka Premier League ka dib markii ay kooxaha isku raaceen in tababarka lagu soo laabto.
Xiddigii hore ee Liverpool iyo England oo haatan khabiir ka ah Sky Sports ayaa yiri: “Xaqiiqdii lama filaan ayay igu noqon doontaa haddii caabuqa laga waayo ciyaartoyda Premier League maanta. Waxaan si buuxda u filanayaa in laga heli doono.
“Natiijada waxay soo baxeysaa galabta, mana ahan inaan waali isku ridno marka ay dhacdo in caabuqa laga helo qaar ka mid ah ciyaartoyda.
“Waxaan qabaa inay dhici doonto, ciyaaryahanka laga helana waxa uu geli doonaa karantiil. Laakiin waa wax dhacaya.
“Waxay ka soo dhacday wadamada kale, waxayna ka dhici doontaa Premier League.”
Horyaalka Premier League ayaa la filayaa inuu dib u bilowdo iyadoo ay albaabada u xiran yihiin bisha danbe.
Kooxda horyaalka la carareysa ee Liverpool oo hogaanka ku heysa 25 dhibcood ayaa loo sheegay in koobka la gudoonsiin doono haddii ay hanashada horyaalka xaqiijistaan.
Carragher ayaa aaminsan inay jiraan arimo kale oo muhiim ah oo miiska saaran ka dib markii weeraryahanka Watford Troy Deeney uu sheegay inuu diidi doono tababarka madaama uu ka baqayo caabuqa Karoona iyo halista uu caabuqa u leeyahay xiddigaha madow.
“Waxaan maqalnay Troy Deeney oo leh kuma laabanayo tababarka, waana in la ixtiraamo go’aankiisa.
“Haddii ciyaaryahan uusan dareemeynin inuu badbaado qabo ama inuusan kalsooni qabin oo ay ka siman yihiin ciyaartoyda horyaalka waa in horyaalka hakad la sii geliyaa.
“Badbaado qabka ciyaartoyda ayaa ka muhiimsan wax walba, mar walbana tani waa ay dhaceysaa sababtoo ah koox walba waxaa ku jiraya hal ama labo ciyaaryahan oo aan badbaado dareemeynin.”